Global Voices teny Malagasy · Mey 2019
Tantara tamin'ny Mey, 2019
Afrika Mainty30 Mey 2019
Antsafa29 Mey 2019
Andao hofantarina bebe kokoa ny momba an'i Blossom Ozurumba, hampiantrano ny kaaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron'ny 29 mey ka hatramin'ny 4 jona 2019. Hozarainy amintsika ny fomba fijeriny ny hoavin'ny fiteny Igbo .
Azia Atsinanana29 Mey 2019
"Koa mihevitra aho fa zava-dehibe ho an'ny vahoaka Taiwaney ny manohy miresaka ity lohahevitra ity - isorohana ny fanadinoan'ny olona ity toe-javatra ity"
Eoropa Afovoany & Atsinanana29 Mey 2019
Feo avy amin'ny Tandrok'i Afrika (Etiopia) sy Sodàna: ny asan'ny vokovoko mena, ny fitongilanan'ny Tandrefana, ny tondron-kolikoly
Afrika Mainty29 Mey 2019
Manomboka ao Darfur ary miaraka amin'ny vaovao tsara ny fijerinay izay lazain'ireo bilaogera ao amin'ny Tandrokin'ny kaontinanta Afrikana sy Sodana. Sleepless in Sudan mitatitra fa nesorina ny fandraràna ny fifamoivoizana ara-barotra any amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana antsoina hoe Kalma.
‘Kolontsain'ny famonoana olona sy ny tsimatimanota': Namoizana ain'olona roa ny tifitra tao amin'ny toerana fisotroana kafe any Filipina
Azia Atsinanana28 Mey 2019
"Tsy mbola fantatra mazava ny antsipiriany feno, saingy ny hany fantatra dia ny hoe nanosika ireo mpamono olona hirehareha amin'ny basiny ampahibemaso ary hitifitra olona io kolontsain'ny famonoana olona sy ny tsimatimanota io."
Tongava Manatevina Laharana ny #RightsCon Tunis Translation Lab: Antso ho an'ireo miteny Arabo, Frantsay ary Espaniôla
Mediam-bahoaka28 Mey 2019
“Ny RightsCon Translation Lab, miaraka miasa amin'ny Lingua, dia miainga avy aminà hevitra tena tsotra: ndeha isika handika ireo bitsika rehetra tsara indrindra nalefan'ny #RightsCon ho amin'ny teny Espaniôla, Frantsay ary Arabo.”
Lasa fomba fiainan'i Yemenita andavanandro ny mitady ny zavatra tena ilaina fototra mba hivelomana
Feo avy ao Zimbaboe miampy firenena 3 hafa (2005)
Afrika Mainty28 Mey 2019
Tongasoa eto amin'ny fizarana fanokafana ny "Feo avy amin'ny Zimbaboe miampy 3" izay antenaiko fa hahita vavao avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Afrikanina maromaro ianao.